Judg 15 | Shona | STEP | Asi nguva duku yakati yapera, panguva yokukohwa zviyo, Samusoni akandoshanyira mukadzi wake, akabata mbudzana; akati, "Ndinoda kupinda kumukadzi wangu mumba." Asi baba vake vakaramba kumutendera kupinda.
Kurwa kwaSamusoni navaFirisitia
1 Asi nguva duku yakati yapera, panguva yokukohwa zviyo, Samusoni akandoshanyira mukadzi wake, akabata mbudzana; akati, "Ndinoda kupinda kumukadzi wangu mumba." Asi baba vake vakaramba kumutendera kupinda. 2 Baba vake vakati, "Zvirokwazvo, ndakati wamuvenga kwazvo; saka ndakamupa shamwari yako. Ko munun’una wake haamupfuuri nokunaka here? Mutore hake iye panzvimbo yake."
3 Samusoni akati kwavari, "Nguva ino handingavi nemhosva kuvaFirisitia, kana ndikavaitira zvakaipa." 4 Ipapo Samusoni akandobata makava ana mazana matatu, akatora mazhenje, akabatanidza miswe miviri-miviri, ndokuisa zhenje pakati pemiswe miviri. 5 Zvino akatungidza mazhenje, ndokuaregedza, akapinda muzviyo zvavaFirisitia zvakanga zvaunganidzwa nezvakanga zvigere kukohwiwa, neminda yemizambiringa neyemiorivhi. 6 Ipapo vaFirisitia vakati, "Ndianiko waita izvozvo?" Vakati, "NdiSamusoni, mukuwasha womuTimuna, nokuti wakatora mukadzi wake, akamupa shamwari yake." Zvino vaFirisitia vakakwira, vakamupisa iye nomukadzi nababa vake nomoto.
7 Samusoni akati kwavari, "Kana mukaita saizvozvo, zvirokwazvo ndichakutsivai, pashure ndigorega." 8 Akavarova pazvidya nezviuno, akavauraya nokuuraya kukuru; akaburuka, akandogara pabako redombo reEtami.
9 Zvino vaFirisitia vakakwira, vakandodzika matende avo paJudha, vakapararira muRehi. 10 Varume vaJudha vakati, "Makwirireiko kuzorwa nesu." Ivo vakati, "Takwira kuzosunga Samusoni, timuitire sezvaakatiitira isu." 11 Ipapo varume vaJudha vakanga vane zviuru zvitatu vakaburukira kubako redombo reEtami, vakati kuna Samusoni, "Hauzivi kuti vaFirisitia vabati vedu here? Chinyiko ichi chawatiitira?" Akati kwavari, "Sezvavakandiitira ini, ndizvo zvandakavaitirawo." 12 Vakati kwaari, "Isu taburukira kuno kuzokusunga, kuti tikuise mumaoko avaFirisitia." Samusoni akati kwavari, "Pikai kwandiri, kuti imwi hamungandivambi mumene." 13 Vakataura naye, vakati, "Kwete; asi tichakusunga, nokukuisa mumaoko avo; asi zvirokwazvo hatingakuurayi." Vakamusunga netambo mbiri itsva, vakakwira naye vachibva padombo.
14 Zvino wakati achisvika Rehi, vaFirisitia vakamupurudzira. Ipapo Mweya waJehovha akauya pamusoro pake nesimba guru; tambo dzakanga dzakasunga maoko ake dzikafanana noruchinda rwakatsva nomoto, zvisungo zvake zvikanyauka pamaoko ake. 15 Akawana rushaya rwembongoro, akatambanudza ruoko rwake, akarutora, ndokuuraya varume vana mazana ane gumi narwo. 16 Ipapo Samusoni akati,"Norushaya rwembongoro ndakauraya boka namapoka, Norushaya rwembongoro ndakauraya vana mazana ane gumi."
17 Zvino wakati apedza kutaura, akakanda kure rushaya rwakanga ruri muruoko rwake nzvimbo iyo ikanzi Ramafirehi. 18 Ipapo akanzwa nyota kwazvo, akachema kuna Jehovha, akati, "Matirwira kwazvo noruoko rwomuranda wenyu; zvino ndichafa nenyota, ndikawira mumaoko avasina kudzingiswa." 19 Asi Mwari wakapamura mukaha paRehi, mvura ikabudapo; zvino wakati anwa, mweya wake ukadzokera maari, akaponazve; naizvozvo ipapo pakatumidzwa Enihakori, tsime riri paRehi kusvikira nhasi. 20 Iye akatonga vaIsiraeri makore makumi maviri pamazuva avaFirisitia.